Xiisadii Ceelberdaale oo furantay & Qasaaraha Weerar Gaadmo ah…… | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Somaliland, WARARKA	> Xiisadii Ceelberdaale oo furantay & Qasaaraha Weerar Gaadmo ah……
Monday, December 13, 2010 Laaska News
(Dila-Gabiley) Wararka laga helayo deegaanada Galbeedka ee u dhaxeeya Gabiley iyo Dila ayaa sheegaya in galinkii dambe ee habeen hore uu dhacay weerar gaadmo ah oo lagu qaaday ama lagu miray Qoys daganaa deegaanka Berdaale,lagana dilay Qoyskaa nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Mahdi Xasan Suldaan(Da’da 25),isla markaana la dhaawacay Aabihii,qoyskan ayaa ka soo jeeda Beesha degta Dila.
Ragga ama kooxda gaadaha fulisay ayaa la sheegay inay kasoo jeedaan Beel kamid ah beelaha degta Gabiley.
Dilkan ayaa wuxuu daba joogaa khilaaf dheer oo la xiriira dhulka,gaar ahaan Berdaale iyo deegaano u dhawdhaw,deegaankaas oo ah dhul beereed.
Khilaafka iyo muranka dhulka ayaa ah mid muddo dheer socday oo ay labada beelood ee kasoo kalajeeda Gabiley iyo Dila ay ku muransan yihiin.
Colaada Berdaale ayaa ah mid sababtay in dad badani ay ku naf waayaan oo labada Beelood oo ah dad deegaan wadaag ah,isla markaana aanba lakala saari karin oo wiil iyo abtigiis wada ah.
Wararka laga helayo meelo kala duwan ayaa sheegaya in uu dilkan dabo joogo aano.
Waxa kaloo horay deegaanada labada beelood udhaxeeya lageeyay Ciidamada somalilnad si ay ukala joojiyaan,waxaase cad in aanay wali istaagin dil iyo gaadmada ka dhacda deegaanka.
Taliyaha Guud ee Ciidanka Booliska Somaliland Gen. Cilmi Rooble Furre oo dhacdadan maanta ka hadlay waraysi uu siiyay BBC da ayaa sheegay inay jirto dilks iyo dhaawaca aan soo sheegnay,ayna fuliyeen falkaas 15 nin, uuna udiray saraakiil wax kaqabata,isla markaana ay soo dhexmareen deegaanada,lana aasay maydkii,xaaladuna ay degan tahay,odayaalna ay tageen.
Mr.Furre ayaa sheegay in war soo gaaray sheegayo in uu dilkani daba joogo aano,ay daba joogeen nin laga dilay qolada Bariga,taas oo aan u fahmay in Beesha Gabilay ay daba joogeen nin horay looga dilay.
Waxaa kale oo sheegay inkastoo uu soo gaaray in dhaqdhaqaaq ka jiro xagga Galbeedka(taas oo la fasiran karo Beesha Dila).
Gabogabadii: Xiisadan ayaa noqotay ama reebtay aanooyin iyo gaadmo,iyadoo noqotay xiisad markii la doono la furi karo,taas oo loo baahan yahay,uguna baaqaynaa inay labada Ardaa ee arrintani ka dhaxeyso ay xaqiiqda iyo runta iyo Cadaalad ay ku kala baxaan,oo ay toos u wada hadlaan,xalna ka gaaraan,maadaama ay iyagu kaba duwan yihiin reer guuraaga, maadaama ay yihiin dad deegaan ah oo wada degan,oo labadoodii beerood ayba isku dhegan tahay,dadka kalana isagaba dhaw yihiin.
Wasaiirka Warfaafinta B & Isgaarsiinta ee Soomaaliya oo sheegay in Dawladdu ka warhayso shirkadda Puntlad utababaraysa ciidanka badda Budhcad Soomaaliya oo Qabsatay Markab wata calanka Panama,lagana leeyahay Laybeeriya